Manangana an'i Al Khomra ny manampahefana misahana ny seranan-tsambo saodiana: ny faritry ny logistika tafiditra ao Saudi Arabia
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Manangana an'i Al Khomra ny manampahefana misahana ny seranan-tsambo saodiana: ny faritry ny logistika tafiditra ao Saudi Arabia
Vaovao Mafana Arabia Saodita • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • fampiasam-bola • Vaovao • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
2019 10 13 tamin'ny 9 51 22
Al Khomra - Faritra misy lozika iraisan'ny firenena manerantany izay natao tamin'ny alàlan'ny fadin-tseranana mifamatotra sy mamerina manondrana faritra, manome fidirana tsy manam-paharoa mankany Moyen Orient, Afrika ary Eropa
Velaran-tany mirefy 2 tapitrisa sqm mahery, misy velaran-tany malalaka iray tapitrisa metatra toradroa
Azo ampiasain'ny mpampiasa vola amin'ny alàlan'ny modely fanofana
Toerana stratejika, tamba-jotra mahomby
Ny manampahefana Saudi Ports (Mawani) dia nanambara ny famoahana ny faritra Al Khomra Logistics Zone, faritra lehibe indrindra amin'ny logistika tafiditra ao Arabia Saodita, nandritra ny fandraisany anjara tamin'ny Konferansa Logistika Saodiana natao teo anelanelan'ny faha-13 sy faha-15 Oktobra 2019 tao Riyadh, Saudi Arabia.
Ny dingana voalohany amin'ny tetik'asa dia natao handrakotra velaran-tany mirefy 2 tapitrisa sqm, miaraka amin'ny velarantany midadasika mihoatra ny 1 tapitrisa sqm izay ho azon'ny mpampiasa vola amin'ny alàlan'ny modely fampanofana.
Al Khomra dia mikasa ny hanome fotodrafitrasa mandroso sy serivisy fanampiny saro-bidy izay handray anjara mavitrika amin'ny fametrahana an'i Arabia Saodita ho ivon-toeran'ny logistika manerantany ary hampiakatra ny fifaninanana amin'ny lafiny fampiasam-bola sy serivisy araka ny voasoritra ao anatin'ny Saudi Vision 2030.
Manome hevitra momba ity dingana lehibe ity, ny filohan'ny HE Mawani Eng. Saad bin Abdulaziz Alkhalb dia namaritra an'i Al Khomra ho toy ny dingana lehibe ho an'ny sehatry ny fitrandrahana arabo any Saudi Arabia. Nampiany koa fa ny faritra vaovao hametrahana logistics dia antenaina hanokatra tombony amin'ny famatsiam-bola sy ny fandraharahana vaovao ary hampiroborobo ny fiaraha-miasa stratejika miaraka amin'ny sehatra tsy miankina izay handray anjara bebe kokoa amin'ny fampandrosoana ny varotra an-dranomasina ary hanatsara ny kalitaon'ny fomba fiasa sy serivisy amin'ny serivisy.
Naveriny ihany koa ny maha-zava-dehibe ny Faritra Logistika Al Khomra noho ny maha akaiky azy ny lalam-barotra iraisampirenena, ny toerany stratejika any amin'ny faritra atsimon'ny governemantan'i Jeddah ary akaikin'ny Seranan-tsambo Jeddah Islamic izay mahatonga azy io ho sehatra lozisialy manerantany ary foibe lehibe mampifandray ny Afovoany Atsinanana, Afrika ary Eoropa.
Eng. Saad bin Abdulaziz Alkhalb nanampy fa Al Khomra dia miavaka amin'ny tamba-jotra mahomby izay mampitohy ny seranan-tsambo Jeddah Islam, seranam-piaramanidina Iraisampirenena King Abdulaziz ary ny Project Landbridge Saudi Arabia ho avy, miaraka amin'ireo làlambe maro samihafa ao amin'ny Fanjakana.
Ny toerana misy an'i Al Khomra manamorona ny morontsiraky ny Ranomasina Mena, làlana lehibe iray ho an'ny mihoatra ny 13% amin'ny varotra an-dranomasina eran-tany, dia hahatonga azy io ho ivon'ny làlan'ny varotra an-dranomasina Silk Road natomboka tao amin'ny Belt and Road Initiative (BRI).
Ankoatr'izay, ny toerana stratejika an'i Saudi Arabia ho foibe mampifandray an'i Moyen Orient sy Eropa sy Afrika miaraka amin'ny toekareny matanjaka dia mamorona andry lehibe hanovana ny fanjakana ho ivon-toeran'ny lozisialy manerantany. Ireo lafin-javatra ireo dia manolotra fonosana manintona ho an'ireo mpampiasa vola liana amin'ny fitrandrahana ny tany fananan'i Mawani sy ny fananganana fiaraha-miasa miaraka amin'ny fahefana hamorona faritry ny lozisialy feno, ao anatin'izany ny Zone Logistics Al Khomra izay vao nambara.
Tsara ny manamarika fa nanangana drafitra stratejika i Mawani hanatsarana ny fahafaha-manao sy fahaizan'ny seranan-tsambon'i Arabia Saodita izay mihoatra ny 50% ny tinady eo an-toerana, amin'ny alàlan'ny fanolorana serivisy lojisialy mitambatra, ireo faritra mifamatotra sy manondrana indray ary ireo serivisy sokajy iraisam-pirenena mifaninana. ho an'ny sehatra tsy miankina amin'ny tanjona hanamorana ny fifanakalozana varotra manerantany.